Sidee loola Tacaali karaa Raadinta Xiriirka Sunta ah | Bezzia
Maria Jose Roldan | 09/06/2021 22:01 | Cilmi-nafsiga
Nasiib darrose, cilaaqaadka sunta ahi waxay ku jiraan iftiinka maalinta iyo Waa dhif iyo naadir in qofkaas aan wax dhibaato ah soo gaarin mararka qaar nolosha. Xiriirka noocan ah wuxuu ku dhici karaa qoyska, shaqsiga ama deegaanka shaqada. Marka laga hadlayo labada isqaba, yeelashada xiriir sun ah waxay keeneysaa isku xirnaanta loo abuuray inay daciifto xaaladuna waxay noqon kartaa mid aan la adkeysan karin
Cawaaqibta iyo cawaaqibta ka dhalanaysa xiriirka noocan ah waa mid aad u daran, gaar ahaan xagga maskaxda ama dareenka. Maqaalka soo socda waxaan ka hadli doonaa cawaaqibka ka dhalan kara xiriirka sunta ah iyo sida looga gudbi karo.
1 Waa maxay cawaaqibta xiriirka sunta ah
2 Waxa la sameeyo ka dib markaad soo afjarto xiriir sun ah
Waa maxay cawaaqibta xiriirka sunta ah
La yeelashada xiriir sun ah qof kale waa u xun tahay lamaanaha cawaaqib xumaduna way sii jiri kartaa waqti kadib inkasta oo xiriirku burburo. Xaaladda maskaxeed iyo shucuureed ee dad badan ayaa ku dhaawacantay qaab aad u daran oo halis ah.
Xaalado badan qofka dhib u soo gaadhay ama ku dhacay xidhiidhka sunta ahi wuxuu la kulmaa cawaaqib xumo aad u daran sida walaaca, niyadjabka, ama isku kalsoonida qofka oo la baabi’iyo. Nooca noocan ahi wuxuu si toos ah u saameeyaa xaaladda maskaxeed ee qofka. Haddii sequlae-yadan aan loola dhaqmin sidii la rabay, qofka iyaga ku dhaca wuxuu ku dhici karaa sumeyn aakhirka dhaawici karta xiriirka mustaqbalka ee dadka kale.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inuu qofku sameeyo waa inuu qirto hubaal inay ku jiraan xiriir sun ah iyo markaa waa lagama maarmaan in laga baxo xiriirka noocaas ah sida ugu dhakhsaha badan. Si kastaba ha noqotee, tallaabada ugu muhiimsan waa in si wanaagsan loola macaamilo dareenka iyo shucuurta sunta ah ee kala duwan.
Waxa la sameeyo ka dib markaad soo afjarto xiriir sun ah
Xaaladaha ka tagida xiriirka sunta ah, way fiicantahay inaad raacdo talooyin taxane ah oo kaa caawinaya inaad naftaada ku fiicnaato:
Ku tiirsanaantaada saaxiibada kuugu dhow iyo qoyskaaga.
Waa muhiim inaad barato xoogaa feker ah ama nasasho ah inuu kaa caawiyo inaad ka fogaato dhammaan fikradaha xun xun.
Waxaa lagugula talinayaa inaad waqti keligaa qaadatid intaadan xiriir kale gelin.
Haddii aad ogaato in xaaladdaada shucuureed aysan fiicnayn, waa muhiim inaad naftaada gasho gacanta xirfadle.
Waa inaad dhinac iska dhigtaa dareenka suuragalka ah ee dambiga iyo si togan u eeg
Way fiicantahay inaad isku daydo inaad saaxiibo cusub yeelato. inuu kaa caawiyo inaad ilowdo noloshii hore.
Ugu dambeyntiina, ku xiridda xiriir sun ah burooyinka waa hawl aan cidna u fududaan. Si kastaba ha noqotee waa muhiim in sidaas la sameeyo, maadaama aad awood u yeelatay inaad aragto cawaaqibka iyo cawaaqibta sunta noocaas ah ay tahay mid aad u daran. Marar badan, qofka ay dhibaatadu saameysey wuxuu ku abuuraa qofkiisa dareen dambi ah dhacdooyinkii ka dhex dhacay xiriirka. Inaad naftaada ku canaanato wax walba waa in laga fogaadaa wakhti kasta maadaama lafteeda, dareenkani yahay nooc kale oo sun ah oo ay tahay in laga takhaluso. Daweynta suurta galnimada suurtagalka ah ayaa fure u ah si qofka ay dhibaatadu saameysey dib ugu dhisaan noloshiisa mar labaad una awoodaan inuu ku raaxeysto nooc xiriir caafimaad leh
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Cilmi-nafsiga » Sida loola qabsado wixii ka dambeeya xiriirka sunta ah